DAAWO:Taliye la dilay oo la diiday in la aaso Muqdisho, Eheladiisii oo afka furtay & Xiisad hor leh
October 19, 2019 Mahad Jama 0
MUQDISHO(P-TIMES) – Warar dheeraadh ah ayaa ka soo baxaya dilkii loo geystay Taliyihii ciidamada Kumaandooska Soomaaliya ee Gorgor oo dhawaan ay soo tababartay dawladda Turkiga, waxaana shalay galab lagu dilay gudaha caasumada, iyadoo ay dilkiisa ka dambeeyen ilaalada Hotel kuyaala magaalada Muqdisho.
Laamaha Ammaanka ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay dhammaan maleeshiyaadkii kusugnaa goobtan uu dilkan ka dhacay oo ay kamid yihiin Ilaalada Hotelka Maa’ida oo uu leeyahay wasiirka Amniga ee Xukuumadda Faderaalka.
Taliye kuxigeenka 1aad ee ciidamada Booliska Soomaaliya Zakiya Xuseen ayaa sheegtay in ay wadaan baaritaano dhacdadan la xariirta, waxayna sheegtay in ay cadaaladda horkeeni doonaan kuwii ka dambeeyey falkan.
Saraakiisha Amnigu, waxay kaloo sheegeen in sababta loo dilay Taliyihii ciidamada Kumaandooska Soomaaliya ay baaris xoog badan ku hayaan, ayna wadaan dadaalo is garab socda.
Meydka taliyaha la dilay & Ilaaladiisa ayaan wali la aasin, waxayna Odayaasha dhaqanku xooga saarayaan sidii ay u heli lahaayeen kuwii ka dambeeyey ciidamadan.
Ilo ku dhow dhow Ehelada marxuumka la dilay ayaa sheegay in aan weli la xirin ciidankii ku lug lahaa falkii xalay, hase ahaatee Taliye kuxigeenka Booliska Jen. Zakiya ayaa qoraal ay barteeda Twitter-ka ku qortay ku sheegtay in la xiray askartii ku sugneyd bar koontaroolka Baar Shabelle oo ku lug lahaa falkaas.
Hase ahaatee warar kale ayaa sheegaya in Sarkaalka la dilay uu ku dhintay agagaarka Ex Hotel Naasahablood 2 oo dhowaan magaca laga bedelay, looguna magac daray Maa’ida, waxaa la sheegayaa in ilaalada Hotelka ay qeyb ka aheyd is rasaaseynta, isla markaana Hotelka uu leeyahay Wasiirka Amniga.